Avanafil ntụ ntụ Tụnyere Viagra na Cialis ntụ ntụ maka ED agwọ
/blog/Avanafil/Avanafil ntụ ntụ Tụnyere Viagra na Cialis ntụ ntụ maka ED agwọ
Ihe na 04 / 11 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Avanafil.
Ihe niile banyere Avanafil uzuzu
1.What bụ Avanafil uzuzu?
2.What bụ Avanafil uzuzu?
3.How ka Avanafil ntụ ntụ na - arụ ọrụ?
4.Otu esi eji Avanafil uzuzu?
5.Dosage nke Avanafil uzuzu
6.Warning nke Avanafil uzuzu
7.Gịnị bụ ihe dị mma nke Avanafil uzuzu?
8.Avanafil ntụ ntụ E jiri ya tụnyere Viagra na Cialis ntụ ntụ maka ED agwọ
10.Ogologo Ogologo Ogologo Do Do Ọgwugwu?
11. Mmetụta dị n'akụkụ nke ọgwụ ED
12.Rare Akụkụ na-emetụta niile ED ọgwụ
13.Warnings banyere ED Drugs
14.Abara uru nke ịzụta Avanafil ntụ ntụ si AAS Avanafil uzuzu soplaya:
I. Rụọ Avanafil uzuzu Ụdị agwa:
1.What bụ Avanafil?
Avanafil a na - eji emeso ndị ikom nwere nsogbu na-adịghị mma (nke a na - akpọkwa adịghị ike mmekọahụ). Avanafil uzuzu bu nke otu ndi ajuju nke a na - akpọ XHNUMX (PDE5) nke phosphodiesterase. Mgbochi ndị a na-egbochi enzyme nke a na-akpọ ụdị phosphodiesterase-5 si na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Mpempe akwụkwọ bụ otu n'ime ebe a na-arụ ọrụ enzyme a.
Erevile dysfunction bụ ọnọdụ ebe penis adịghị ike ma gbasaa mgbe nwoke na-enwe mmekọahụ obi ụtọ, ma ọ bụ mgbe ọ na-enweghị ike na-ere. Mgbe mmadụ na-akpali agụụ mmekọahụ, ọ ga-eme ka ahụ ya dịkwuo mma ka ọ gbasaa ọbara ya iji mee ka e nwee ụlọ. Site na ịchịkwa enzyme ahụ, uzuzu Avanafil na-enyere aka ịnọgide na-arụ ụlọ mgbe ọnyá na-emegharị site na mmụba ọbara na-arịwanye elu na amụ. Enweghị mmegharị anụ ahụ na ntinye, dị ka nke ahụ na-eme n'oge mmekọahụ, Avanafil uzuzu agaghị arụ ọrụ iji mee ka e wuo ya.
Avanafil ntụ ntụ ntụ ntụ, ihe onwunwe nke Avanafil uzuzu, ụdị White ntụ ntụ, ọtụtụ steroid ngwaahịa soplaya na-emekarị ịzụta akwa dị ọcha Avanafil uzuzu online, mee ya n'ụdị ụdị ọ bụla a rụchaworo Avanafil uzuzu, nkọwa nke Avanafil ntụ ntụ na AAS dị n'okpuru:
Ụdị Mkpụrụkpụ: C23H26ClN7O3
3.HowE Avanafil uzuzu ọrụ?
Avanafil uzuzu di na ogwu nke a na - akpọ phosphodiesterase (PDE) inhibitors. A na - eji ya na - eme ihe na - adịghị mma nke erectile (ED: enweghị ike, enweghi ike inweta ma ọ bụ na - echere ndị ikom). Nke a na-eme ka nwoke a nweta aha ya site na isi ihe na-arụsi ọrụ ike nke na-enyere aka ntanye ọbara n'ime ahụ n'ụzọ nkịtị. E nwere ihe ndị ọzọ na-eme ka ntụ ọka Avanafil dị irè kama enweghi mmetụta na mmetụta ndị dị na ya bụ isi ihe nwere ike inye.
Ọ na-arụ ọrụ site na ọbara na-arịwanye elu na-erugharị na amụ n'oge mkpali mmekọahụ. Ọbara ọbara a nwere ike ime ka e wuo ya. Avanafil uzuzu anaghị agwọ ọrịa ma ọ bụ mụbaa agụụ mmekọahụ. Avanafil ugbo anaghị egbochi ime ime ma ọ bụ mgbasa nke ọrịa ndị a na-ebute site ná mmekọahụ dịka nje virus na-akpata immunodeficiency (HIV).
Avanafil uzuzu bu ogwu ogwu nke eji eme ihe maka imetu ihe na adighi ike (enweghi ike iru ma o bu kwadoo ulo oru penile), nke a makwaara dika ogwu nke erectile (ED). Ọ bụ na otu ọgwụ ndị a na - akpọ ndị na - emechi ọgwụ phosphodiesterase nke gụnyere tadalafil (Cialis ntụ ntụ), sildenafil (Viagra) na vardenafil (Levitra). A na-emepụta nke penis site na njuputa nke penis na ọbara. Na-emejupụta n'ihi na ọbara arịa ndị na-ebute ọbara n'ọbara na-amụba n'ọtụtụ ma na-enyefekwu ọbara na penis, na, n'otu oge ahụ, arịa ọbara na-ebute ọbara site na penis belata nha ma wepụ obere ọbara site na penis . Mkpali mmekorita nke na - eduga n'inwe ụlọ na - akpata mmepụta na ntọhapụ nke nitric oxide na ntinye. The nitric oxide na-akpata enzyme, guanylate cyclase, iji mepụta cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Ọ bụ cGMP nke bụ isi maka ịbawanye ụba ma belata ọnụ ọgụgụ ọbara ndị na-ebuga ọbara na site na amụ, na-eme ka e wuo ya. Mgbe cGMP na-ebibi enzyme ọzọ, phosphodiesterase-5, ọbara ọbara laghachiri n'ogologo ha, ọbara na-ahapụ akwụkwọ ahụ, ụlọ ahụ ga-akwụsịkwa. Avanafil uzuchi egbochi phosphodiesterase-5 si na-ebibi cGMP ka cGMP nọgide ogologo oge. Nkwụsi ike nke cGMP na-eduga n'ọgba aghara aghara aghara site na mkpịsị ọbara ọbara. Akwukwo FDA na April 2012 kwadoro Avanafil.
4.How a Jiri Avanafil uzuzu?
Tupu iwere Avanafil uzuzu
gwa dọkịta gị na onye na-ahụ maka ọgwụ ike ma ọ bụrụ na Avanafil uhie, ọgwụ ọ bụla ọzọ, ma ọ bụ ihe ọ bụla n'ime ihe ndị dị na mbadamba mbadamba ihe dị na Avanafil. Jụọ onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ lelee ihe ọmụma onye ọrịa maka ndepụta nke ihe ndị ahụ.
Ejila ugbo Avanafil ma ọ bụrụ na ị na-ewere ma ọ bụ na-ewere riociguat (Adempas) ma ọ bụ nitrates dị ka dinosrate (Dilatrate-SR, Isordil, BiDil), isosorbide mononitrate (Monoket), na nitroglycerin (Minitran, Nitro-Dur, Nitromist , Nitrostat, ndị ọzọ). Nitrates na-abịa dị ka mbadamba nkume, n'okpuru ala (n'okpuru ire) mbadamba, sprays, patches, pastes, na ointments. Jụọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịnweghị n'aka ma ọ bụrụ na ọgwụ gị nwere nitrates.
egbula ọgwụ ọjọọ n'okporo ámá nke nwere nitrates dịka amyl nitrate na butyl nitrate ('poppers') mgbe ị na-eburu uzuzu Avanafil.
Gwa onye dọkịta gị na onye na-ahụ maka ọgwụ na ọgwụ ndị ọzọ ọgwụ, ọgwụ vitamin, ihe mgbakwunye nri na ọgwụ ndị ị na-eme ma ọ bụ atụmatụ ịnara. Jide n'aka na ị ga-ekwupụta ihe ndị na-esonụ: mkpụrụ mkpụrụ akwụkwọ dịka alfuzosin (Uroxatral), doxazosin (Cardura), prazosin (Minipress), tamsulosin (Flomax, na Jalyn), silodosin (Rapaflo) na terazosin; ụfọdụ ọgwụ na-edozi ahụ dị ka fluconazole (Diflucan), itraconazole (Onmel, Sporanox), na ketoconazole (Nizoral); njedebe (Emend); clarithromycin (Biaxin, na Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac); erythromycin (EES, E-Mycin, Erythrocin); Ndị na-eme ihe banyere nje HIV dị ka atazanavir (Reyataz, na Evotaz), fosamprenavir (Lexiva), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, na Kaletra), na saquinavir (Invirase); ọgwụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọgwụgwọ maka arụmọrụ erectile; ọgwụ maka ọbara mgbali elu; nefazodone; verapamil (Calan, Covera, Verelan, ndị ọzọ); na telithromycin (Ketek). Dọkịta gị nwere ike ọ dị mkpa ka ị gbanwee usoro ọgwụ gị ma ọ bụ nyochaa gị nke ọma maka mmetụta ndị dị na ya. Ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ nwere ike iji nkwonkwo Avanafil na-emekọ ihe, ya mere na-agwa dọkịta gị gbasara ọgwụ niile ị na-ewere, ọbụna ndị na-apụtaghị na ndepụta a.
gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na dọkịta agwa gị ka ị zere ịlụ nwanyị maka ọgwụgwọ, ma ọ bụrụ na ị nwere ịwa obi n'ime ọnwa 6 gara aga ma ọ bụrụ na i nweela ụlọ nrụgide nke dị ogologo karịa oge 4. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ma ọ bụ nwee mgbe ọ bụla nwere ọnọdụ nke na-emetụta ọdịdị nke mkpụrụ ndụ dịka nkwụsị, cavernosal fibrosis, ma ọ bụ ọrịa Peyronie; obi mgbawa; ọrịa strok; enwe obi mgbawa; a na-egbochi ikuku; angina (mgbu obi); ọbara mgbali elu ma ọ bụ dị ala; obi mgbaghara; nsogbu ọbara ọbara dika ọrịa sickle cell ania (ọrịa nke ọbara uhie uhie), otutu myeloma (cancer nke sel plasma), ma obu leukemia (cancer nke ọbara uhie); ọnya; nsogbu ọbara ọgbụgba; ma ọ bụ imeju ma ọ bụ akụrụ ọrịa. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere ma ọ bụ mgbe ọ bụla nwere retinitis pigmentos (ọrịa anya ketara eketa) ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị nwetụla ọhụụ ọhụụ, karịsịa ma ọ bụrụ na a gwara gị na ọhụụ ọhụụ kpatara site na mgbochi ọbara ọgbụgba enyere gị aka ịhụ.
ị ga-amara na ọ bụ naanị ụmụ nwoke ka Avanafil bụ ntụ. Ndị inyom agaghị eburu ube Avanafil, karịsịa ma ọ bụrụ na ha bụ ma ọ bụ nwere ike ime ime ma ọ bụ na-enye nwa ara. Ọ bụrụ na nwanyị dị ime na-ewepu ntụ ọka Avanafil, ọ ga-akpọ dọkịta ya.
gwa dọkịta gị banyere iji ihe ọṅụṅụ mmanya na-aba n'anya mee ihe mgbe ị na-agwọ Avanafil. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya dị ukwuu (karịa iko mmanya atọ ma ọ bụ atọ gbaa nke ntutu) ka ị na-eburu uzo Avanafil, ị ga-enwe ike inweta mmetụta ụfọdụ dị na Avanafil uzuzu dika dizziness, isi ọwụwa, ngwa ngwa ngwa ngwa, na ala ọbara mgbali.
ọ bụrụ na ịwa ahụ, gụnyere ịwa ahụ, gwa dọkịta ma ọ bụ dọkịta eze na ị na-ewere Avanafil uzuzu.
I kwesiri imata na inwe mmekorita nwoke na nwanyi nwere ike ibute nsogbu n'obi gi, karia ma oburu na i nwere oria obi. Ọ bụrụ na ị nwere obi mgbu obi, dizziness, ma ọ bụ ọgbụgbọ mgbe ị na-enwe mmekọahụ, kpọọ dọkịta gị ozugbo ma zere inwe mmekọahụ ruo mgbe dọkịta gị agwa gị ya.
gwa ndị niile na-ahụ maka ahụike gị na ị na-ewere Avanafil uzuzu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọgwụgwọ mberede maka nsogbu obi, ndị na-ahụ maka ahụike na-emeso gị ga-achọ ịma mgbe ị ga-ejidere Avanafil uzuzu.
Mgbe ị na-ewere Avanafil uzuzu
I kwesịrị ịma nke a mgbe ị na-eburu uzuzu Avanafil
Gwa ndị niile na-elekọta gị ahụike na ị na-eji ọgwụ a. Nke a na-agụnye ndị dọkịta gị, ndị nọọsụ, ndị na-enye ọgwụ, na ndị dọkịta.
Zere ịnya ụgbọ ala ma na-eme ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ omume ndị na-achọ ka ị nọrọ na nche ruo mgbe ị hụrụ otú Avanafil uhie si emetụta gị.
Iji belata ohere nke inwe mmetụta dị egwu ma ọ bụ na-agafe, ebili nwayọọ nwayọọ ma ọ bụrụ na ị nọ ọdụ ma ọ bụ dina ala. Kpachara anya na-arịgo na steepụ steepụ.
Ejila ọgwụ ndị ọzọ na-eji ọgwụgwọ nke ike mmekọahụ eme ihe.
Ọ bụrụ na ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi vaịn ma ọ bụ na-eri mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi mgbe mgbe, soro dọkịta gị kwurịta okwu.
Soro dọkịta gị kwuo tupu ị aṅụ mmanya.
Ọgwụ a adịghị egbochi mgbasa nke ọrịa ndị dị ka nje HIV ma ọ bụ ịba ọcha n'anya nke na-esi na ọbara ma ọ bụ inwe mmekọahụ. Enwela ụdị mmekọahụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị ghara iji condom na-egbu oge ma ọ bụ polyurethane. Ekerela uru ọ bụla ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị ka nsí nsị ma ọ bụ agụba. Soro dọkịta gị kwurịta okwu.
Nsogbu anya anya siri ike mere na Avanafil uzuzu. Nke a nwere ike ibute mgbanwe n'ọhụụ na mgbe ufodu oge na-adịghị anya, nke nwere ike ghara ịla azụ. Soro dọkịta na-ekwurịta okwu.
A naghị anabata ọgwụ a maka ụmụaka.
A ghaghị itinye ọgwụ ndị a na-atụghị anya ya n'ụzọ pụrụ iche iji hụ na anụ ụlọ, ụmụaka, na ndị ọzọ agaghị eri ha. Otú ọ dị, ịkwesighi ịgbanye ọgwụ a n'ụlọ mposi. Kama nke ahụ, ụzọ kasị mma ị ga-esi jiri ọgwụ gị mee ihe bụ site na usoro mmeghachi omume ọgwụ. Gwa onye na-ere ọgwụ ma ọ bụ kpọtụrụ mpaghara gọọmenti / mkpofu mpaghara gị ka ị mụta banyere mmeghachi omume na mpaghara gị.
5.Ọnụọgụ ọgwụ nke Avanafil uzuzu
Avanafil uzuzu biara dika mbadamba nkume iji wepu ya. Maka ụmụ nwoke na-ewere 100 mg ma ọ bụ 200-mg doses, a na-ejikarị ma ọ bụ na-enweghị ihe oriri dịka mkpa, ihe dị ka 15 nkeji tupu ịlụ nwanyị, ọ bụghị ihe karịrị otu ugboro n'ụbọchị.
Maka ndị ikom na-ewere ọgwụ 50-mg, a na-ewerekarị ntụ ntụ Avanafil ma ọ bụ na-enweghị nri dị mkpa, ihe dịka 30 nkeji tupu arụ ọrụ mmekọahụ. Ejila okpukpu Avanafil karịa ugboro ugboro na 24 awa.
7.Gịnị Bụ Omume mmetụta nke Avanafil uzuzu?
Mmetụta dị aṅaa ka ọgwụ a nwere ike ịkpata?
Avanafil uzuzu nwere ike ime ka o nwee nsogbu. Gwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na otu n'ime mgbaàmà ndị a dị njọ maọbụ na ị gaghị apụ:
Avanafil uzuzu nwere ike ibute mmetụta ndị ọzọ. Kpọọ dọkịta gị ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla dị iche iche mgbe ị na-aṅụ ọgwụ a.
Ọ bụrụ na ị nwere nkwarụ na-erectile ma na-ele Avanafil ntụ ntụ ma e jiri ya tụnyere Viagra na Cialis ntụ ma gụọ. Ọ bụrụ na ị so n'etiti ndị mmadụ 30 nde mmadụ nọ na United States bụ ndị na-enwe nsogbu na-erectile na ịchọrọ ịṅụ otu n'ime ọgwụ ndị na-adịghị erectile, nkwenye nke Avanafil ntụ ntụ site na Food and Drug Administration (FDA) pụtara ugbu a ị nwere ọgwụ ise site na nke ịhọrọ. Ndi Avanafil kpochapu oke gi n'ihi na o bu ogwu kachasi ohuru? Kedu ka e si jiri ọgwụ atụ Avanafil tụnyere ọgwụ ndị ọzọ maka arụ ọrụ erectile? Ma nke kachasị mkpa, olee otú Avanafil ntụ ntụ dị irè si tụnyere Viagra na Cialis ntụ ntụ?
Ihe Ise Ogwu Na-edozi Ahụ Ere Ise
Drugsdị ọgwụ ọgbụgba erectilection ise nke FDA nabatara na ahịa bụ Avanafil ntụ ntụ (Stendra), sildenafil (), tadalafil (), na (ma Levitra na Staxyn, ụdị mgbasa nke Levitra). Drugs drugsụ ọgwụ ndị a niile so na otu ọgwụ ọgwụ a maara dị ka phosphodiesterase (PDE) inhibitors n'ihi na ha niile na-arụ ọrụ site na igbochi enzyme phosphodiesterase type 5 (PDE-5).
Mgbe a na-egbochi PDE-5, nke a na-eme ka ọbara na-erugharị na mpempe akwụkwọ, nke ga-esi na ya pụta, n'ọtụtụ ọnọdụ, rụpụta ihe. Anyị na-ekwu "ọtụtụ ihe" n'ihi na uru ọgwụ ise ahụ dị irè yiri ya, dabere na ojiji ahụ, na nkezi banyere 77% na 84%.
Ebe ọ bụ na uzuzu Avanafil bụ ihe kachasị ọhụrụ na mgbakwunye nke ọgwụ ndị na-adịghị mma erectile, ka anyị lebakwuo ya anya tupu anyị ejikọta ya na ọgwụ ndị ọzọ ED. N'ọnwụnwa ahụ, usoro 77% zuru ezu nke ndị ikom na-enweghị ntụpọ erectile n'ozuzu ha bụ ndị weghaara Avanafil uzuzu ka e wuru ya ma e jiri ya tụnyere 54% nke ndị ikom weere placebo. N'etiti ndị mmadụ na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa na-arịa ọrịa, 63% rutere ụlọ mgbe ọ na-ewere ntụ ntụ Avanafil ma jiri 42% were placebo.
Ka anyị leba anya n'ihe otu otu 12-week Phase III trial karịsịa. Enyere ụmụ mmadụ 646 ka ha were 50, 100, ma ọ bụ 200 mg nke ugbo 30 kwụ ọkụ na Avanafil tupu ịmalite ọrụ mmekọahụ. Enweghị ihe mgbochi na nri ma ọ bụ ịṅụ mmanya. N'ihe ọmụmụ 300 mere n'oge ọmụmụ ihe ahụ, 64% na 71% nwere ihe ịga nke ọma n'etiti ndị ikom bu ndị were Avanafil ntụ ntụ jiri ya tụnyere 27% n'etiti ndị na-ewere placebo. Ozi ọma ndị ọzọ: 59% na 83% nke 80 gbalịsiri ike na-enwe mmekọahụ karịa ihe karịrị 6 awa mgbe ọ nwụsịrị Avanafil uzuzu na-enwe ihe ịga nke ọma ma e jiri ya tụnyere nanị 25% iji nwalee ndị ikom weere placebo. N'ime ụmụ nwoke, Avanafil ntụ na-arụ ọrụ dị ka obere 15 nkeji. (Goldstein 2012)
N'ezie, otu ihe nwere ike ịkewapụ Avanafil uzuzu sitere na ọgwụ ndị ọzọ bụ ED bụ otú ngwa ngwa ọ na-arụ ọrụ. Dr. Wayne Hellstrom, bụ prọfesọ nke urology na Ụlọ Akwụkwọ Nkà Mmụta Ọgwụ na Tulane na New Orleans, kwuru n'akwụkwọ akụkọ Reuters na Avanafil uzuzu "nwere ike ime ngwa ngwa nke anọ," dị ka nchọpụta ahụike gosipụtara na ọ nwere ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa dị ka 15 nkeji . Otú ọ dị, e nwere akụkọ banyere Cialis ntụ ntụ na-arụ ọrụ na ihe dịka 15 nkeji.
Ụfọdụ ọgwụ ndị na-adịghị mma na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa ndị ọzọ, nri pụkwara ịbụ ihe na-akpata (Avanafil ntụ ntụ tụnyere Viagra na Cialis ntụ ntụ):
Cialis ntụ ntụ: 15 gaa na 45 nkeji, nri anaghị enwe mmetụta
Levitra na Staxyn: minit 25, mana enwere ike ichere oge ma ọ bụrụ na ewere ya na nri
Avanafil uzuzu: minit 30, nri anaghị eche na inwe mmetụta
Viagra: minit 30, mana enwere ike ichere oge ọ bụrụ na eji ya na nri
10.Ogologo Ogologo Ogologo Do Do Ọgwugwu? (Avanafil uzuzu tụnyere Viagra na Cialis ntụ ntụ)
Ihe ndị na-adịghị mma na-arụ ọrụ erectile dị iche n'otú mmadụ ga-esi atụ anya na ọ ga-enwe ike iru ụlọ. Oge oge nwere ike ịdị iche iche, dabere na ụbụrụ na ihe ndị ọzọ
Cialis ntụ ntụ: awa 36
Levitra na Staxyn: 4 ruo 5 awa
Avanafil uzuzu: karịa 6 awa na ụfọdụ ndị ọrịa
Viagra: 4 ka 5 awa
11.Set na mmetụta nke ọgwụ ED
Ọ bụ ezie na mmetụta ndị metụtara ụdị ọgwụ ọjọọ ED niile yiri nke ahụ, enwere esemokwu nke pụrụ ịdị mkpa nye ụfọdụ ndị nwoke.
Cialis ntụ ntụ: Kasị nkịtị bụ isi ọwụwa na afọ ojuju. Ihe na-adịkarịkarị bụ ihe mgbu, dizziness, ọdịdị ihu, nkwonkwo akwara, mkpọchi aka.
Levitra na Staxyn: Ihe kachasị bụ ihu na isi ọwụwa. Ihe na-adịkarịkarị bụ nrịzigharị, nhụjuanya, nchịkọta ntụrụndụ, ọgbụgbọ.
Avanafil uzuzu: Ihe kachasịkarị bụ ụfụfụ, isi ọwụwa, nchịkọta ntụrụndụ, na imi imi. Ihe na-adịkarịkarị bụ ihe mgbu, afọ ọsịsa, dizziness, ọbara mgbali, influenza, ọrịa ahụ, na ọrịa iku ume nke elu.
Viagra: Ihe kachasịsị bụ ọdịdị ihu, isi ọwụwa, nsị. A naghị ahụkarị ọhụụ, afọ ọsịsa, dizziness, mgbakasị nasal, ọkụ ọkụ, na ọrịa urinary.
Ise ise nwere ike ime ka ihe ọhụụ na-enweghị mmetụta na-agụnye ọhụụ na mberede na otu ma ọ bụ abụọ anya, nhụsịrị mberede nke ịnụ na otu ma ọ bụ abụọ ntị, na ọhụụ mgbanwe. Ọ bụrụ na ịnweta otu n'ime mmetụta ndị a, kpọtụrụ onye na-ahụ maka ahụike gị ozugbo.
Mmetụta ọzọ na-adighi ụkọ bụ priapism, ma ọ bụ oge 4. Ndị ikom nwere ụlọ ọrụ nke na-adịru 4 awa ma ọ bụ ogologo oge kwesịrị ịchọ nlekọta ahụike ozugbo.
Tupu iwere Avanafil uzuzu ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ọgwụ ndị ọzọ ED, ị ga-agwa onye na-ahụ maka ahụike gị banyere ọgwụ niile na ihe mgbakwunye ị na-ewere, ma ndenye ọgwụ na n'elu-na-counter. Nke a dị oké egwu karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eburu ala, n'ihi na nchikota nwere ike ime ka ihe dị njọ, mberede na mgbali ọbara. Ị ga-agwakwa dọkịta gị ma ọ bụrụ na i nweela ihe ndị a:
Nsogbu obi, dịka mkparụ obi, angina, nkụda obi, obi mgbagwoju anya
Ọwa obi n'ime ọnwa 6 ikpeazụ
Ọrịa ọbara, dịka ọtụtụ myeloma, ọrịa leukemia, sickle cell anemia
Retinitis pigmentos (ọrịa mkpụrụ ndụ ihe nketa)
Ọhụhụ nnukwu ọhụụ
Ọnọdụ ọgwụgwọ ọ bụla
Ndị na-arịa ọrịa na-erectile nwere ọgwụ dịgasị iche iche nke nwere ike inyere ha aka ịchịkwa ọrịa a. Usoro ọgwụgwọ ndị ọzọ nwere ike ịgụnye nfuli nza, ihe ndị e chere echiche, penile injections, implants penile, ndụmọdụ, na ọgwụgwọ. Tupu ịmalite ụdị ọgwụgwọ ọ bụla nke erectile, ndị mmadụ kwesịrị ịtụle nhọrọ niile ha nwere ma soro ha na-enye ndị nlekọta ahụ ike.
14.Abara uru nke zụta Avanafil uzuzu si AAS Avanafil uzuzu soplaya:
1.High Ọdịmma Na Ọnụ Ahịa Ahịa:
1) Ịdị ọcha:> 99%
2) Anyị bụ ndị na-emepụta ihe ma nwee ike inye ngwaahịa ụlọ ahịa dị elu.
2.Fast na nchekwa nzipu:
3.E nwere ndị ahịa n'oge ụwa dum:
Avanafil uzuzu Ihe niile ị ga-ama tupu ịzụta clenbuterol ntụ ntụ
Tags: Avanafil uzuzu, Avanafil uzuzu maka ire ere, zụta Avanafil uzuzu
Dobutramine Ntụ ntụ ntụ ntụziaka	Mgbochi ibu ibu: Ceilistat ntụ ntụ na Orlistat ntụ ntụ